Photo Mupepeti muZimbabwe
Photoshop onlineMufananidzo mupepetiMufananidzo mupepetiPhoto yekugadzirisa software
Shanyira saiti Dzidza ZVIMWE
Photo Edhita - 4 Akanakisa Yemahara Photo Edhi Online
Iwo akanakisa epamhepo ekugadzirisa mafoto maturusi mukukurumidza kuona:
Ndeapi emahara mafoto edhita online akanakisa? Mhinduro yacho inoenderana nezvinodiwa uye zvishuwo zvekugadzirisa mapikicha. Pamhepo, pane mazana ezvigadzirwa anowanikwa ese ari kukwikwidza kuti utarise. Mazhinji ndeekugadzirisa mifananidzo, uye mamwe eanofarira kugadzirira. Asi, pane mashoma anopenya pamusoro pevamwe vese. Ngatitarisei pane izvo isu zvatinofunga kuti ndiyo yepamusoro online mupepeti.
Pixlr X: Ichi hachizi chitsva pikicha mupepeti asi chatovezwa seye'inofanira-kuva 'chirongwa pane mazhinji ehunyanzvi ekugadzirisa mafoto mawebhusaiti. Pixlr X inogona kuita zvakawanda kupfuura kungoita basa rekutora mifananidzo zvakare. Yakazara nezvinhu zvakadai se-insta-speed (kuwana pakarepo kune vatsva vatsva / mafiritsi), shandura zvidzitiro, uye zvakare auto-mbeu, kupisa mukati, kushandura, uye kubvisa-size miganhu.
GIMP: GIMP haisi imwe yepamhepo yekugadzirisa mapikicha chishandiso. Icho chehunyanzvi-giredhi mufananidzo Manipulation chishandiso chinokutendera iwe kuti uite chero chaunoda nemifananidzo. Zvimiro zvinosanganisira: chinja mazinga, batanidza mifananidzo, tenderera, tambanudza, skew, bata, wedzera mameseji, nezvimwewo, kana iwe uchinzwa kushoma zvishoma, unogona kunyange kuwedzera, kugadzirisa, kana kubata matete. Uye uine anopfuura mazana mana mafirita, une chokwadi chekuwana chimwe chinhu chinobatsira.
Stock Mapikicha: Kana iwe uchitsvaga akanakisa epamhepo ekugadzirisa mapikicha maturusi, usatarise kupfuura masitoko emafoto masiti. Kune akatiwandei akasiyana kunze uko uye ivo vanokutendera iwe kuti ushandise zvakazara zveAdobe Photoshop zvinhu senge migero nemakakona. Nekungobaya-bata mbeva yako, unogona kudzoreredza, kurima, kushandura saizi, kupenya, uye kunyange kuwedzera mafirita. Mamwe mawebhusaiti zvakare ane maturusi anoita kuti iwe uwedzere mavara kumifananidzo yako. Izvi zvakanaka kune zvinhu sekugadzira mablog mablog uye profiles yekambani.
iPiccioli: Kana iwe uchida kugadzira mifananidzo yakanaka kubva kune ako aunofarira mafoto, iPiccioli ndiyo yakakodzera Photo Mhariri yako. Iine intuitive interface, iPiccioli inokupa zvese zvishandiso uye maficha aunoda kushandura mapikicha ako kuita mabasa ehunyanzvi. Zvimiro zvinosanganisira: masosi masenduru, tenderera, zoom, deskew, simbisa, batanidza, uye zvimwe zvakawanda. Izvi hazvisi izvo chete zveakanakisa epamhepo edhisheni mapikicha anowanikwa, asi zvakare ane zvimwe zvinotonhorera maficha sekuita kunge iPad inoenderana. Unogona kusada kugadzirisa mapikicha ako kubva kune yako iPad zvakadaro.
Photo Edhirowa Pro: Pamwe imwe yeanonyanya kuzivikanwa online mapikicha ekugadzirisa maturusi. Photo Editor Pro iri nyore chaizvo kushandisa. Izvo zvakanaka kune vanotanga nekuti iri mushandisi-inoshamwaridzika. Kunyangwe avo vane zvishoma vasina ruzivo vanogona kugona iyi web browser. Iyo interface inoita kuti zvive nyore kudzidza uye kufamba kuburikidza neayo ese maficha. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakafambira mberi, saka unogona kudzidza zvakawanda nezve Photo Mhariri Pro mune software's bhuku.
Befunky: Kana iwe uchida kushanda neakakosha mhedzisiro, iwe uchada Befunky. Befunky ine akawanda akasiyana maficha anoita ekugadzirisa mapikicha mhepo. NaBefunky, unogona kugadzira zvinyorwa zvine hupenyu, shandisa mafirita kumifananidzo, wedzera mameseji kumacolgeges, shandura ruvara rwemberi, zvinhu zvekufukidza, gadzira miganhu, wedzera mameseji akatenderedza zvinhu, kupisa mukuita, uye zvimwe zvakawanda. Hazvina mhosva kuti zvido zvako ndezvipi, iwe unozogona kuwana yakanakisa Photo Mhariri yako iwe muwebhu akanakisa vapepeti.
Corel Dhirowa: Corel Dhirowa ndeye topnotch pamhepo yekugadzirisa software ine akawanda mafambiro epamusoro. Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezveCorel Draw ndechekuti inoshandisa mushandisi. Kana usati wamboshanda naCorel kare, hauzove nedambudziko kuishandisa. Iyo yekushandisa-inoshamwaridzika interface inoita kushanda nayo mhepo. Uyezve, unogona kugadzirisa zvinyorwa uye zvinhu mu3D kuti uwane mifananidzo inoshamisa.
Instagram: Instagram imwe yewebhu browser inofanirwa kuongorora. Nevashandisi vanopfuura mamirioni zana, hazvishamise kuti vagadziri vazhinji nevashandisi ve Instagram vari kubvunza kuti 'Ndinogadzirisa sei mapikicha pa Instagram?' Instagram ine akati wandei maficha maficha anosanganisira echishandiso ayo anonyanya kushandisa-ane hushamwari uye mugadziri wecollage. Kana iwe uri mushandisi we Instagram, iwe uchada kuve unokwanisa kugadzirisa uye kugovana mafoto ako neshamwari.
Pixlr: Pixlr ndeimwe webhusaiti inozivikanwa kwaunogona kutora mifananidzo yako nekuita shanduko kwadziri. Sa Instagram, iwe uchada kuve unokwanisa kugadzirisa ako mapikicha. Chinhu chikuru pamusoro pePixlr ndechekuti pane zvakawanda zvinobatsira maficha senge'search kuburikidza nemifananidzo 'sarudzo, save to photo' sarudzo uye kunyange 'advance scrub' sarudzo! Zvese izvi maficha zvinogadzira ako mapikicha paPixlr mhepo. Nekuda kweizvozvo, hazvishamise kuti vanhu vazhinji vanga vachibvunza kuti 'ndogadzirisa sei mapikicha angu ari pixlr?'
Photo yekugadzirisa software
© Copyright 2021 zwbestphotoeditors.online - All Rights Reserved
Saiti ino mune dzimwe nyika / matunhu: